ICosatu ithi izwe alinamholi - Umbiko | News24
ICosatu ithi izwe alinamholi - Umbiko
Johannesburg – ICosatu izofuna isigungu esiphezulu se-African National Congress (ANC) kuzwelonke (NEC) ukuba sidingide ngokubuyiselwa kwamacala ayethweswe uMengameli Jacob Zuma uma sekubanjwa umhlangano.
Umfelandawonye wezinyunyana utshele i-Eyewitness News ukuthi unethemba lokuthi umhlangano uzothatha izinqumo ezinqala mayelana nalokho ekubiza ngokwehluleka kukaZuma ukuhola.
Umhlangano oyisipesheli we-NEC, okulindeleke kudingidwe kuwona ukubulawa kosopolitiki eKZN nangezinsolo zokusetshenziswa kwezinsiza zikahulumeni ukulwa izimpi zezepolitiki, bekulindeleke ubengoMsombuluko kodwa wahlehliselwa uLwesihlanu.
OLUNYE UDABA: Kutholwe usana kuplastiki kadoti
Okhulumela iCosatu uSizwe Pamla uthi i-NEC kuzomele ithathe izinqumo ezizogcina ubumbano kwi-ANC nezizonika i-ANC isiqalo esisha.
ICosatu ithi uZuma uyehluleka ukuhola, hhayi nje kuphela i-ANC kodwa nezwe. “Izwe alinamholi.”’